Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Kurumidza Tiger Nuts Chikafu Rangarira YeSalmonella Kubva kuRodent Infestation
Kurumidza Tiger Nuts Chikafu Rangarira YeSalmonella Kubva kuRodent Infestation
Musika weAfrican Foodways uri kurangarira mamwe akarongedzerwa zvakare Tiger Nuts kubva kumusika nekuda kwekugona kusvibiswa kweSalmonella kubva mukubatwa nemakonzo.
Chigadzirwa chakarangarirwa chakatengeswa muManitoba.
• Kana uchifunga kuti wakarwara nekudya chigadzirwa chakadzokororwa, fonera chiremba wako
• Tarisa kuti uone kana une chigadzirwa chakayeukwa mumba mako
• Usadye chigadzirwa charangarirwa
• Usashande, kushandisa, kutengesa, kana kugovera chigadzirwa charangarirwa
• Zvigadzirwa zvakarangarirwa zvinofanirwa kukandwa kunze kana kudzoserwa kunzvimbo iyo zvakatengwa
Chikafu chakasvibiswa neSalmonella chinogona kusatarisika kana kunhuwa chakaora asi chinogona kukuita kuti urware. Vana vadiki, vakadzi vane pamuviri, vanhu vakuru uye vanhu vane immune system isina simba vanogona kubata hosha dzakakomba uye dzimwe nguva dzinouraya. Vanhu vane hutano vanogona kuona zviratidzo zvenguva pfupi zvakadai sefivha, kutemwa nemusoro, kurutsa, kuda kurutsa, dumbu remudumbu uye manyoka. Yenguva refu yematambudziko inogona kusanganisira yakanyanya arthritis.
• Dzidza zvakawanda nezvenjodzi dzeutano
Sign kusauka kuyeuka Notices neemail uye kutitevera pasocial vezvenhau
Wona tsananguro yedu yakadzama yechengetedzo yekudya uye yekuyeuka maitiro
• Mhan'ara kuchengeteka kwechikafu kana kunetseka kwekunyorera
Kurangarira uku kwakakonzerwa nekutumirwa kubva kuSaskatchewan Health Authority.
Pakave pasina zvataurwa zvirwere zvine chekuita nekudyiwa kwechigadzirwa ichi.
Chii chiri kuitwa
Canadian Chikafu Inspection Agency (CFIA) iri kuita ongororo yekuchengetedza chikafu, izvo zvinogona kutungamira mukuyeukwa kwezvimwe zvigadzirwa. Kana zvimwe zvigadzirwa zvine njodzi zvakanyanya zvikayeukwa, iyo CFIA inozivisa veruzhinji kuburikidza neyakagadziridzwa yeyevero yekurangarira chikafu.
ICFIA iri kuona kuti indasitiri iri kubvisa chigadzirwa chakayeukwa kubva pamusika.
Canadian Food Inspection Agency utano Rodent Salmonella Saskatchewan ingwe
Mamirioni gumi nemaviri Mabasa Akarasika Kuti Otomatiki muEurope Pakazosvika 12
Kukosha kwekushanya eco mabheji kukura sevafambi...
Kuvandudzwa kutsva kwemarwadzo ekumusana
Atzaro Beach Ibiza beach kirabhu inovhurazve zhizha ra2022
Ndege itsva yekuCanada yevaraidzo inodana Toronto Pearson...
Vafambi vechiJudha vanopomera Lufthansa kuva antisemitic
Kudzoreredzwa kweSector Tourism kuchiri paTrack Zvisinei...
Microalgae muMhuka Feeds Sector Musika 2022 Kiyi...
SKAL International Kudana Runyararo, Diplomacy mu...
India ichave yakanakisa rwendo rwekuenda
Macaroni Grill irikugadza Tsika Itsva muKuwedzera ...
Tourism Students Kuvaka iyo New Metaverse
Global Bucket Loader Indasitiri Kuongorora &...
Gene Therapy Muedzo weDiabetic Neuropathy Imwe yeakawanda ...
1 Hotera Haitang Bay, Sanya inowana ina-Nyeredzi/ Inokurudzirwa...
Songtsam Hotels, Resorts & Tours Inopinda mu...
Maitiro ekusimudzira peji rako pa Instagram pasina kushandisa ...
New Hog inopinda munzira
Global Travel Trends muAsia-Pacific
Ramangwana reBusiness Travel